अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी नयाँ रहस्यको खुलासा ! « Surya Khabar
अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी नयाँ रहस्यको खुलासा !
न्युयोर्क । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनविद र तथ्याङ्क विज्ञहरुको एक समूहले अमेरिकामा यसै महिनामा भएको राष्ट्रपतिय चुनावमा साइबर ह्याकिङ्गको शङ्का व्यक्त गरेका छन् । यसकै कारण यो समूहले हिलारी क्लिन्टनलाई तीनवटा राज्यमा खसेको भोटको पुनस्गणना गर्ने सल्लाह उनीहरुले दिएका छन् ।
साइबर ह्याकिङबाट भोटमा तलमाथि गरिएको दाबी गरिएका राज्यहरुमा विस्कन्सिन, मिसिगन र पेन्सिलभेनिया रहेका छन् । समाचार अनुसार साइबर ह्याकिङको मद्दतबाट जम्मा मतमा तलमाथि गर्न सकिन्छ । शुक्रबारको कारोबार दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
समाचार अनुसार विज्ञहरुले दिएको यस सल्लाहबारेमा अहिलेसम्म हिलारी क्लिन्टनको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।
हिलारी तथा उनको अभियानको जिम्मा लिएकाहरुले यसबारेमा केही भनेका छैनन् । उनीहरुले मत पुनस्गणनाका लागि निवेदन दिनेबारेमा हिलारीको टीमले कुनै योजना बनाएको छैन ।
राष्ट्रपतिमा चुनिएका डोनाल्ड ट्रम्पले विस्कोन्सिन र पेन्सिलभेनियामा थोरै मात्रै मतले जित निकालेका थिए । ट्रम्पले मिसिगनमा पनि थोरै मतल जितेका थिए ।
तर रोचक कुरा के छ भने यी तीनवटै राज्यहरुमा डेमोक्रेटिक पार्टीलाई धेरै विश्वास थियो । पछिल्लो चुनावमा पनि यहाँ डेमेक्रेटले नै जितेको थियो ।